नेपाल लाइभ शुक्रबार, असार २७, २०७६, २२:१३
सिंहलाई कैलालीबाट पक्राउ गरी मोटरसाइकलमा राखी कञ्चनपुरतर्फ लैजाँदै प्रहरी।
धनगढी- नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष बबरजंगबहादुर सिंह पुनः पक्राउ परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार नै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै दायर मुद्दामा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर, कैलाली जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका सिंह प्रहरीलाई झुक्याएर मोटरसाइकलमा कैलालीको घुइँयाघाट पुगेका थिए। अदालत बाहिर सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
प्रहरीले उनी अदालतबाट गइसकेको थाहा पाएपछि खोजी गर्दै जाँदा घुइँयाघाटबाट पक्राउ गरेको कैलाली प्रहरी प्रवक्ता दक्षकुमार बस्नेतले बताए।
बस्नेतका अनुसार सिंहविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक अपराधअन्तर्गतको मुद्दा दर्ता भएकाले पक्राउ गरिएको हो। प्रवक्ता बस्नेतले सिंहलाई पक्राउ गरी प्रहरीले कञ्चनपुर पठाउने तयारी गरेको बताए।
यसअघि बैसाख २७ गते सिंहलाई सशस्त्र प्रहरी बलले धनगढी उपमहानगरपालिका–१६, बेहडाबाबा माध्यमिक विद्यालय परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो। विद्यालयमा शुल्क वृद्धिको विरोध गरिरहेका बेला उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
यता, पक्राउ परेका विद्यार्थी नेता सिंहले आफूलाई प्रहरीले झुटो आरोप लगाएर पक्राउ गर्न लागेको अदालतमै पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए। ‘यो कस्तो लोकतन्त्र हो? हामीले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार छैन? अहिले अदालतले मलाई थुनामुक्त गरेको छ। तर, बाहिर प्रहरी मलाई झुटो मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्न बसेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृति त राणा शासनमा हुन्थ्यो।’